विश्वभर महिलाहरुले प्रत्येक वर्ष ८ मार्चको दिन नारी सम्मान तथा सशक्तिकरण हेतु विभिन्‍न कार्यक्रमको आयोजना गरी धुमधामले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँछन् । यस दिन समाज र राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अग्रणी महिलाहरुलाई सम्झना गर्दै र सम्मान दर्शाउने गरिन्छ ।
नेपालको राजनीति मैले बुझे, देखे, भोगे अनि सुने देखि नै अस्थिर छ । यो अस्थिरता कसले ल्यायो ? किन ल्यायो ? किन ल्याउनु पर्‍यो ? यसले फाइदा कसलाई ? यो चाहने को ? किन स्थिरता हुनै सक्दैन ? धेरै प्रश्नहरु अनुत्तरित छन किनकी धेरैले बुझेर पनि उत्तर दिन मान्दैनन किनकी सही उत्तर दिदै हिडे उसको हातमुख नै जोडिन मुस्किल छ ।
नेपालमा जस्तै बेलायतमा पनि हरेक १० वर्षमा जनगणना हुने गर्दछ । बेलायतका चार वटा राज्यहरूमध्ये इङ्गल्यान्ड र वेल्समा एउटा संस्थाले जनगणना गर्ने गर्दछ भने स्कटल्याण्ड र नर्देन आयरल्याण्डमा अलग अलग संस्थाले जनगणना गर्ने गर्दछन् । इङ्गल्यान्ड र वेल्सको जनगणना अफिस फर न्याशनल स्टाटिटिक्स (ओएनएस) ले गर्दछ भने स्कटल्याण्डको न्याशनल रेकर्ड अफिस अफ स्कटल्याण्डले गर्दछ ।
कसले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन हुँदैन ?
स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाइका साथीहरुलाई यो खोप लगाइँदै छ । यस विषयमा म केही जानकारी गराउन चाहान्छु । सर्वप्रथमत यो खोप सुरक्षित छ । यसबाट कुनै किसिमको हानिकारक प्रभावहरु हुनेछैनन् भन्ने कुरा अनुसन्धानहरुबाट सिद्ध भइसकेको छ । त्यसकारण निर्धक्क भएर यो खोपमा विश्वास गरेर लगाउनु हामी सबैको कर्तब्य हो ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कृत्य प्रतिगमनका लागि औजार हुन पुगेको छ’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कृत्य प्रतिगमनका लागि औजार हुन पुगेको छ भने आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धरोहर दाबी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सदावहार ढुलमुले चरित्र थप चिन्ताको बिषय भएको छ ।
नागरिक बिहिन राष्ट्र
पोखरा । साल २०६२/६३ को राष्ट्र व्यापी अग्रगामी आन्दोलन पश्चात् निर्माण भएको एउटा राजनैतिक परिवर्तनको सतही र अपुरो विश्लेषण हुनेछ सायद यो आलेख । परिवर्तनका निम्ति लडिएका सम्पुर्ण संघर्षहरुको विश्लेषण गर्ने न मेरो ल्याकत छ ।
वैशाख १ लाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने हाम्रो मौलिक परम्परा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको इस्वी सम्बत्लाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँछौं ।